Ambohidratrimo : Grenady hita teo an-tokotanin’ny kaomina -
AccueilSongandinaAmbohidratrimo : Grenady hita teo an-tokotanin’ny kaomina
Ambohidratrimo : Grenady hita teo an-tokotanin’ny kaomina
14/11/2018 admintriatra Songandina 0
Niteraka savorovoro naharitra. “Grenade” miisa 35 miaraka amin’ny bala miisa telo no hita nilevina teo an-tokotanin’ny kaomina Ambohitrimanjaka, omaly maraina. Tokony ho tamin’ny 7 ora maraina tany ho any ny teny manodidina no nisahotaka noho ny fahitana ity baomba mahery vaika ity. Araka ny fantatra ihany, mbola tsy nisy mpiasa tao amin’ity kaomina ity no niseho ny toe-javatra. Ankizy iray nilalao, ary nisikotsikotra tany teo amin’ny faritry ny tokotanin’ ny distrika no nahita ireo “grenade” vitsivitsy tanaty lavaka. Niantso ny rainy izy, ka io indray no nampandre ny zandary tao an-toerana nijery ifotony.
Tonga teny an-toerana, ary nandray fepetra avy hatrany ireo zandary, ka avy hatrany dia nanala ny olona hiala lavidavitra. Notapahina ihany koa ny lalana tsy ahafahan’ny olona mivezivezy hatreny amin’ny 100 metatra manodidina, nisorohana izay mety ho loza aterak’izany. Tsy vitan’izany fa nantsoina nanatevina ny fiaraha-miasa ihany koa ny miaramila avy ao amin’ny “Corps de protection civil”, araka ny efa fizaran’ asa amin’ny tranga toa izao. Izy ireo moa dia efa nanaraka fiofanana manokana amin’ny fikirakirana ireny baomba na zavatra mipoaka ireny. Voatery natao tamin’io fotoana io izany ny hetsika antsoina hoe” opération de neutralisation et destruction “, izay niainga tamin’ireo “grenade” , miaraka amin’ireo bala hita ireo. Tamin’izany no nahalalana fa “grenade”, efa nilevina ampolon-taonany maro ity sendra nisy nahita ity. Nandritra izany kosa dia mbola nitohy ny fanohizana sy ny fikarohana tao anaty lavaka nahitana ireo baomba ireo, raha toa ka mbola misy miafina, hoy ny nambaran’ny zandarimariam-pirenena. Taorian’ny fiomanana rehetra dia nopotehina tamin’ny alalan’ny fanapoahana teny amin’ ny “carrière” teny Ambohidratrimo ihany ireo fitaovam-piadiana ireo. Efa eo am-pelatanan’ny mpitandro filaminana kosa ny raharaha, ary efa nanomboka nanokatra ny fanadihadiana izy ireo.
Nihorohoro ny mponina sy ny mpandalo teny amin’ny manodidina. Hita taratra tamin’ny alalan’ny tambajotran-tserasera izany, fa natahotra ny hisian’ny fipoahana mahery vaika ireo olona teny amin’ny toerana nisy ity baomba ity. Na dia efa nisy aza ny fandraisana andraikitra nataon’ny mpitandro filaminana, dia nikorontana ny sain’ny vahoaka. Tao ny milaza fa misy ambadika politika izao zava-miseho izao, izay raha tsiahivina dia vao ny andron’ny fifidianana ihany koa no naharenesana fipoahana “grenade”, teny Ambohimanarina. Andrasana izay ho valin’ny fanadihadiana ataon’ny manam-pahefana amin’izay tompon’andraikitra amin’izao zava-misy izao.
Mitombo tsikelikely ny vokatra azo avy amin’ny fifidianana izay ho filoham-pirenena fihodinana faharoa. Ho an’ny KMMR dia mbola mandresy hatrany hatreto ny kandidà Marc Ravalomanana, ary 55, 37% n’ny vato manan-kery no azony. Ny mifanohitra ...Tohiny
Fanabeazana : Ampy izay ny rafi-pampianarana tsy nahomby